Imaanshaha Gaaritaanka cusub
Humming waa baararka astaanta ah Pomp & Circumstance, kooxda maal-galinta McKnight waxay u dabaaldegtay "qalin-jabinta" maal-galinteedii saamaysay. Oktoobar 2, saldhigga hore ee suuq-suuqeed ee suuq-iibinta - Santuuqa Global Equity Fund - "Qalinjabiyey" ka soo rogistay saamiga tijaabo ah ee saamiga ugu weyn ee $ 2,2 bilyan. Kordhinta asalka dhabta ah ee $ 25 malyan illaa $ 75 malyuun oo maaliyadeed ayaa caddaynaysa in saameynteena saameynta ku leh saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto guulo dhaqaale.
Oo iyana way ka sii fiicnaan doontaa. Laga soo bilaabo maalgashadayada hore saddex sano ka hor, Generation Global Equity ayaa ahayd sanduuqa xisaabinta ugu fiican ee kuqoran macaash dhan McKnight. Maalgashiga McKnight ayaa ku soo laabtay 17.3% marka la eego miisaaniyadda adduunka MSCI ee 6.6% (laga bilaabo Juun 2017). Seddexda sano, maalgashadeena ugu horreeya ee $ 25 milyan ayaa kor u kacday in ka badan $ 38 milyan - oo ah tallaabooyin waxtar u leh heer kasta.
Maareynta Maalgashiga Guud waxay isticmaashaa horudhaf maalgalin muddo dheer ah oo ka madax ah maamulayaasha firfircoon. Shaqaalaheeda si ulakac ah ayey u sahamiyaan fursadaha dhaqaale ee ka yimaada meeraha cadaadiska - iyo maalgashiga soo hagaagaya ee ku aaddan isbeddellada sida kobcinta magaalooyinka, kordhinta baadka, iyo dadaalka caalamiga ah ee lagu yareeyo gaasaska aqalka dhirta. Waxay u arkaan inay sii wadi karaan inay noqdaan kuwo abaabulaya dhaqaalaha caalamiga ah ee cusub - aragtida ah in la isku waafajiyo yoolalka deeq-lacageedka McKnight.
Fikirka dugsiga hore wuxuu weydiinayaa haddii maamulaha sanduuqa uu ku guuleysan karo inkasta oo tixgelin la xoojinayo. Xaqiiqadu waa, waxa suurtagal ah in la helo guul maxaa yeelay waxaa ka mid ah.
"Maamulayaasha cusub ee leh habab cusub oo maalgelin ah macnaheedu waa khataro cusub," ayuu yiri David Crosby, Guddoomiyaha Guddiga Maalgashiga iyo Macaamilka McKnight ee Piper Jaffray. "Guddigeennu waxa uu shaki ku jiraa inay saamayn ku yeesheen maalgashiga, laakiin waxaan soo qaadnay waddo dheer. Iyadoo dadaalka adag ee aan ku kobcineyno habka maalgashadeena - khatarta fekerka ah si loo hubiyo in kororka uu kordho sida suuqyada isbedelaan. Waxaan helnaa fursado xiiso leh iyo maamulayaal wanaagsan wadada. "
Guddiga Maareynta Hay'adda McKnight Board ayaa awood u siiyay guddiga maalgashiga inay ku maal gashadaan si ka duwan markii ay ku kaceen $ 200 milyan (10% dakhliga) ee maalgashiga dadweynaha iyo kuwa khaaska ah oo si dhow ula shaqeynaya hawshooda. Intaa waxaa dheer, la taliyaha cusub ee Imprint Capital (hadda qeyb ka mid ah Goldman Sachs) baadhitaano iyo ku talinaysaa fikrado cusub.
McKnight wuxuu baranayaa in saameynteeda saameynteeda saameyn ku yeelashada barnaamijku uu noqon karo marxalad ay tahay inuu si ammaan ah u dhagaysto maareeyayaasha maaliyadeed ee cusub; saameyn ku yeelanshada maalgashiga waa hal rubuc saddex meelood meel oo ah qiyaasta qoondaynta caadiga ah. Tani waxay noo ogolaanaysaa in aan ogaano habka maamulaha, cilmi-baarista iyo waxqabadka si buuxda oo kadibna go'aan ka gaaraya in istiraatiijiyaadka ilaa heer-gaaban ama guud ahaanba loo rogo. (Waxaad baadhi kartaa maalgelinta saameynta McKnight halkan.)
Intaa waxa dheer, go'aanka lagu maalgelinayo Generation wuxuu kor u qaaday wadahadal ballaaran oo ku saabsan maareynta dhaqaalaha bulshada, isdhexgalka bulshada (ESG) iyo fikir la'aanta. Inta badan kulamadii ugu dambeeyay ee ay qabsadeen waxaa ka mid ah su'aalaha ESG. McKnight waxa uu qiimeynayaa wakiilka maamulaha maaliyadda sanadkiiba. Labo sanno marba waxaan qiimeynaa xoojinta karboonka casriga ah iyo kartida ESG ee maareeyayaasha maaliyadeed.
Waxaa jira gacmo badan oo lagu xayeysiinayo wareegyada maalgashiga ee ku saabsan xaddidaadaha ka imaan kara inay ka fekeraan guud ahaan arrimaha ku saabsan arrimaha bulshada iyo deegaanka. Cilmi-baaristu waxay muddo dheer baartey su'aashan iyadoo la adeegsanayo jawaabo isa soo taraya. Mid ka mid ah mid gaar ah waxtar leh 2015 daraasada meta eegay natiijooyinka laga soo qaatay 2,200 oo daraasado kala duwan oo kala duwan - in ka badan 90% waxay soo gabagabeeyeen sababaha ESG lahaa saameyn dhexdhexaad ah ama saameyn ku leh waxqabadka dhaqaale shirkadaha. Maalgeliye ahaan, McKnight wuxuu doonayaa maamuleyaashu inay si ballaaran iyo qoto dheer uga fikiraan ganacsiga adag iyo khataraha dhaqaale iyo fursadaha.
Fikirka dugsiga hore wuxuu weydiinayaa haddii maamulaha sanduuqa uu ku guuleysan karo inkasta oo tixgelin la xoojinayo. Xaqiiqadu waa, waxa suurtagal ah in la helo guul maxaa yeelay waxaa ka mid ah. Taasina waa waxa ku dhacay jiilka Jiilka si aad ah oo isku dhafan oo u fakirsan si loo sii wadi karo maalgashiga.